Wareysiga Ronaldo Ciyaarta kadib: ‘Aad ayaan u walwalsanaa bilowga Ciyaarta’ | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Wareysiga Ronaldo Ciyaarta kadib: ‘Aad ayaan u walwalsanaa bilowga Ciyaarta’
Wareysiga Ronaldo Ciyaarta kadib: ‘Aad ayaan u walwalsanaa bilowga Ciyaarta’
Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyey ku dhawaad ​​800 oo gool kooxda iyo dalkiisa wuxuuna kula guuleystay koobab badan 19 sano laakiin weeraryahanka reer Portugal ayaa qirtay inuu ka walwalsanaa ciyaarta.
Ronaldo, oo 118 gool u dhaliyey Man United muddadii ugu horreysay, ayaa laba jeer shabaqa soo taabtay kulankii ay 4-1 kaga badiyeen Newcastle United garoonka Old Trafford taasoo kooxda Manchester u dirtay hoggaanka sare ee kala sarreynta Premier League.
Ciyaarta kadib ayuu Wareysi siiyay Skysports
“Runtii aad ayaan u walwalsanaa, in aanan ciyaar feecan soo bandhigi waayo,” Ronaldo ayaa sidaa u sheegay Sky Sports xilli ay taageerayaasha United u kala harin. “Soo dhaweyntiisa.
“Waxaan ku fikirayay xalay inaan doonayo inaan tuso inaan wali awood u leeyahay inaan caawiyo kooxda, markii aan bilaabay ciyaarta, aad ayaan u walwalsanaa markii ay magaceyga heesayeen”.
Ronaldo, oo sideed koob oo waa weyn kula guuleystay United, ayaa dib ugu biiray kooxdii ku guuldarreysatay inay ku guuleysato horyaalka tan iyo markii ugu dambeysay oo ay kor u qaaday sannadkii 2013 oo uu maamulayay tababarihiisii ​​hore Alex Ferguson.
Weeraryahanka reer Portugal ayaa sheegay in Ole Gunnar Solskjaer uu haysto awoodii uu ugu guuleysan lahaa horyaalka iyo sidoo kale Champions League laakiin wuxuu ku daray kooxda inay u baahan tahay waqti.
“Waxaan heysanaa koox fantastik ah, koox dhalinyaro ah iyo tababare cajiib ah,” ayuu yiri Ronaldo. “Laakiin … waa inaan dhisnaa kalsooni, kooxdu waxay u baahan tahay inay bislaato haddii ay rabto inay ku guuleysato Premier League iyo Champions League.
“Waxaan u malaynayaa inaan ku jirno hab wanaagsan, waa inaan guuleysanaa kulamada, inaan dhisnaa kalsoonida, inaan dhisno kooxda, waxaana halkaan u joogaa inaan caawiyo kooxda”.
Previous articleMarcus Rashford oo hadal layaab ah ka sheegay Cristiano Ronaldo iyo goolashiisa Man United
Next articleReal Madrid oo ku dhawaaqday Liiska Xidigaha u Ciyaaraya kulanka Celta Vigo